बीचबीचमा गायक दुर्गेश भन्छन् : ‘मोडर्न तीज गीत बनाएको’ - मनोरञ्जन - नेपाल
महिलाले मात्रै तीजका गीत गाइरहेका बेला फुत्त झुल्किए, दुर्गेश थापा ‘हामी पनि नाच्नुपर्छ बीचबीचमा’ भन्दै । उनको यो गीत युट्युबमा दुई महिनामा ४४ लाखभन्दा बढीले हेरिसकेका छन् ।
तीजको गीत पुरुषले गाएको भनेर कसैलेकेही भनेनन् ?
त्यसरी प्रत्यक्ष त कसैले केही भनेनन् । तर गीत युट्युबमा राखेपछि कमेन्टमा चाहिँ अब तीजमा पुरुषले ८० प्रतिशत अधिकार खोज्न लागे भनेर लेखे । बरु गीत निकाल्नुअघि केही डर लागेको थियो ।
तीजको गीत छ । बाजागाजा पश्चिमा शैलीका बढी प्रयोग गरेको थिएँ । तर यसमा कसैले गाली गरेनन् ।
यो गीतपछि त तीजका कार्यक्रम भ्याईनभ्याई भयो होला नि ?
भ्याईनभ्याई नै त होइन तर व्यस्त बनायो । ६ भदौसम्म भक्तपुर, तनहुँको आँबुखैरेनी, बाग्लुङ, बुटवल गरी चार ठाउँमा कार्यक्रम गरिसकेँ । त्यसपछि दाङको लमही र चितवनमा छ । तीज सकिएपछि तीजकै कार्यक्रमका लागि भारतको असम जाँदै छु । त्यहाँ आधा दर्जन कार्यक्रम छन् ।
यो गीत रुचाइनुको कारण ?
तीजका गीत एकै खालका आइरहेका थिए । मैले युवा र बूढाबूढी दुवैलाई सुहाउने गीत अभाव देखेँ । नाच्ने शैलीले युवालाई समेट्यो । तर संगीतमा प्रयोग भएको पुरानो मेलोडी धुनले आमा, हजुरआमाहरुलाई सुन्दा रमाइलो बनाइदियो । मेलोडी नमारीकन मोडर्न बनाइयो ।
गीत, संगीतमा दर्शक–श्रोता के खोज्दा रहेछन् ?
नयाँ स्वाद । अरुभन्दा फरक भएन भने जति राम्रो गाए पनि र मिहिनेत गरे पनि केही हुनेवाला छैन ।
पुरुषले गाउनुबाहेक यो तीज गीतमा नयाँपन के छ ?
हामी पनि नाच्नुपर्छ भनेर दिदीबहिनीलाई भाइले भन्छ । यो भनेको तीज दिदीबहिनीको मात्र होइन, सबैले ग्रहण गर्नुपर्छ भनिएको हो । परिवारै खुसी हुने कुरा छ यसमा ।
गीत लेख्दा कुनै घटना थियो ?
आधा घन्टामा लेखेँ । आधा घन्टामा म्युजिक गरेँ । चल्छ भन्ने विश्वासै थिएन । यति हिट होला भन्ने लागेको भए भिडियोलाई अर्कै बनाउँथेँ ।
लाहुरबाट भागेपछि लामो समयसम्म संगीत क्षेत्रमा जम्न नसक्दा गल्ती गरिएछजस्तो लागेन ?
तालिम गर्दा गाह्रो भएपछि र माथिल्ला तहकाले तलकालाई गर्ने व्यवहारले भारतीय फौजबाट भागेँ । तर यता झन् गाह्रो । ठमेलका ८० प्रतिशत डान्स बारमा काम गरेँ । म हावा टाइपको थिएँ । दिउँसोभरि नाचिन्थ्यो, बेलुका बारमा । उमेर बढ्दै गएपछि पनि सोचेजस्तो प्रगति भएन । अनि पछुतो लाग्यो । घरमा बाआमाले पनि छँदाखाँदाको जागिर छाडिस् भनेर गाली गर्नुभयो । बा त तीन वर्षसम्म बोल्नुभएन । संघर्ष र धैर्यले बिस्तारै जीवन सार्थक बन्दै गयो ।
अहिलेचाहिँ बाआमा के भन्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा खुसी नै उहाँहरु । जे गरिस् ठीक गरिस् भन्नुहुन्छ । अहिले पश्चात्तापबोध हुने पालो बाको ।
ट्याग: ९ प्रश्नदुर्गेश थापातीज गीत